La Ogaaday: Lacagta Waalida Ah Ee Uu Roberto Firmino Ku Helay Goolkii & Caawintii Southampton Oo La Ogaaday – Kooxda.com
Home 2018 February Ingiriiska, Wararka Maanta La Ogaaday: Lacagta Waalida Ah Ee Uu Roberto Firmino Ku Helay Goolkii & Caawintii Southampton Oo La Ogaaday
La Ogaaday: Lacagta Waalida Ah Ee Uu Roberto Firmino Ku Helay Goolkii & Caawintii Southampton Oo La Ogaaday
Weeraryahanka kooxda Liverpool ee Roberto Firmono ayaa qaab ciyaareed waali ah soo bandhigay kulankii ay kooxdiisa Liverpool guusha 2/0 ah ka gaartay kooxda Southampton Axadii kulan ka tirsanaa horyaalka premier league todobaadkiisii 27-aad kana dhacay garoonka St Mary’s.
Xiddiga reer Brazil ayaa dhaliyay goolka 1-aad daqiiqadii 6-aad isaga oo gool u badalay baas uu ka helay Mohamed salah ka hor inta uuna si cajiib ah caawiye uga noqon goolkii uu mahamed salah dhaliyay.
Taageerayaasha Liverpool ayaa si aad ah ula dhacay qaab ciyaareedka weeraryahanka xilli uu Jurgen Klopp amaan ugu qubeeyay kadib markii ay dhamaatay ciyaartu.
“Goolka 1-aad waxa uu ahaa cajiib, waxa uu ahaa gool wakhti hore ah hadana caawintiisii ayaa sidoo kale ahayd mid cajiib ah”ayuu tababarah Reds u sheegay Sky Sport.
“Goolka 1-aad waxa uu ahaa rogaal celis umana malaynayo in aad u ciyaari karto si ka fiican sidi ay Mo iyo Roberto u ciyaareen goolkii 2-aad”.
“Hadii aad doonayso in aad hesho dhibaato yar oo kulanka ahayd, waxa aanu awoodnay in aanu kulanka soo xidhno wakgu hore, laakiin maanu samayn sidaad laakiin waxa aanu u difaacanay si fiican”.
Hadaba Roberto Firmino ayaa lacag waali ah ku helay qaab ciyaareedkiisii xalay goolkana ku dhaliyay midka kalena ku caawiyay.
Sida laga soo xiganayo Football Leaks: xiddiga reer Brazil ayaa haatan mushahar ahaan kooxda uga qaata lacag dhan 68,085 kun oo Gini iyo waliba lacago waali ah oo guno ah.
Waxa uu 5-tiisii gool ee ugu horaysay ku helay lacag dhan 25 kun oo Gini gool kasta, halka uu 45 kun oo Gini ku helay 6 ilaa 10 gool intii u dhexaysay waxa uu sidoo kale 11 ilaa 15 gool ku helay lacag dhan 65 kun ooo Gini waana lacag ka badan 85 kun oo Gini.
Axadii shalay waxa uu dhaliyay goolkiisii 20-aad ee xilli ciyaareedkan taas ayaa la macno ah in uu jeebka ku shubtay lacag ka badan mida uu todobaadkii mushaharka u qaato kaliya 6-dii daqiiqo ee ugu horaysay kulankii Southampton.
Laakiin xiddiga ayaa mushahar kale oo guno ah sii shaqaystay kadib markii uu si cajiib ah caawiyaha uga noqday goolkii Mohamed salah.
Firmino ayaa lacag dheeraad ah oo dhan 31 kun oo Gin ku hela gool kasta oo uu caawiye ka noqday ilaa xilli ciyaareedkan taas oo la macno ah in uu helay lacag dhan 116 kun oo Gini kulankii Southampton.
Xiddigan ayaa marka mushaharkiisa iyo waliba lacagaha gunada ah la isku daro hela lacag dhan 184,085 kun oo Gini todobaadkii.